Bayaanka cusub ee Glasgow ee ku saabsan Talaabada Cimilada ee Dalxiiska oo la bilaabay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Bayaanka cusub ee Glasgow ee ku saabsan Talaabada Cimilada ee Dalxiiska oo la bilaabay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Switzerland War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Bayaanka cusub ee Glasgow
Kulanka Cimilada ee COP26 todobaadkan, Dalxiiska waxa uu ku dhawaaqay Xaalad Degdeg ah oo Cimilo, oo ah hindise lagu taageerayo ficilka cimilada, waxa uu ku dhawaaqi doonaa in uu noqday barnaamijka cimilada calanka ee Mu'asasada Safarka. Intaa waxaa dheer, Mu'asasada Safarku waxay daaha ka qaadi doontaa doorkeeda gaarka ah ee bixinta taageerada joogtada ah ee cusub ee la bilaabay "Bayaanka Glasgow ee ficilka Cimilada ee Dalxiiska", iyadoo la kaashanaysa Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ee Qaramada Midoobay.
Labada ogeysiisba waxay ka dhigaan Travel Foundation safka hore ee dadaalka hubinta in ganacsiyada dalxiiska iyo meelaha loo aadayo ay si degdeg ah u dhimi karaan, ula qabsanayaan isbeddelka cimilada, iyo taageerada dib-u-soo-nooleynta deegaanka.
Mu'asasada Safarka iyo UNWTO ayaa wada iskaashi si ay u dardargeliyaan ujeeddooyinka hindisaha.
Waxay sidoo kale riixayaan hamiga ku dhawaaqida Glasgow miisaan si ay ula kulmaan yoolalka cimilada adduunka.
The daahfurka Bayaanka Glasgow COP26 ee Noofambar 4 waxay calaamad u tahay tallaabo muhiim ah oo ku saabsan waxqabadka cimilada ee dalxiiska. Labadaba ku dhawaaqista Dalxiiska iyo Mu'asasada Safarku waxay xubno ka ahaayeen Guddiga Qabyo-qoraalka ee shanta xisbi ee Bayaanka - Ballanqaad caalami ah oo loogu talagalay dhammaan ururrada socdaalka iyo dalxiiska si loo yareeyo qiiqa qaybta nuska 2030, si loo waafajiyo qorshayaasha waxqabadka cimilada ee shan "dariiqo," iyo in si guud looga warbixiyo horumarka la sameeyay.
Dhammaan ururada socdaalka iyo dalxiiska waa lagu dhiirigelinayaa taageer Baaqa, iyo Dalxiiska ayaa ku dhawaaqaya doorkoodu waxa uu noqon doonaa u doodista, iyo dardargelinta, ficilka cimilada ee la dedejiyey iyada oo xoogga la saarayo sinnaanta cimilada iyo adkeysiga, iyo baahiyaha bulshooyinka loo socdo.
Keenista ku dhawaaqida Dalxiiska ee ururkeeda iyo la shaqaynta UNWTO si ay u horu mariso hindisaha ku dhawaaqida Glasgow, Mu'asasada Safarku waxay xaqiijinaysaa doorkeeda hogaamineed ee ah urur u socda hawlaha cimilada ee dalxiiska. Waxay bilaabi doontaa barnaamij hawleed diiradda lagu saarayo hawlaha sida:
Daabacaadda warbixinta horumarka sannadlaha ah ee ku dhawaaqida Glasgow, bixinta falanqaynta cidda saxeexday Bayaanka, iyo sida ay ugu sii socdaan ballanqaadyadooda.
Samaynta habab joogto ah, waax-ballaaran oo cabbiraadda kaarboonka iyo warbixinta.
Tijaabinta waddooyin cusub oo wax looga qabanayo kakan, mas'uuliyadaha la wadaago ee hoos yimaada "scope 3" (silsiladda qiimaha) qiiqa, taas oo inta badan ka dhacda meelaha loo socdo.
Xoojinta iskaashiga iyo bulshada – tusaale ahaan iyadoo loo marayo Dalxiiska ayaa ku dhawaaqaya bulshada khadka tooska ah iyo shabakada iskaa wax u qabso, iyo samaynta la qorsheeyay ee xarumaha gobolka.
Dhisidda awoodda saxiixayaasha ku dhawaaqida Glasgow, iyo cabbiridda aqoonta lagama maarmaanka ah, agabka, iyo dhiirigelinta looga baahan yahay isbeddelka qaybaha oo dhan
Mu'asasada Safarku waxay sidoo kale hogaamin doontaa iskudubaridka Guddiga La-talinta ee Baaqa Glasgow kaas oo ku shiri doona qaab dhismeedka Barnaamijka Dalxiiska ee Hal Planet Sustainable Tourism ee Qaramada Midoobay si loo hubiyo kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo cilmiga cimilada ayaa udub dhexaad u ah hindisahan. Habka warbixinta cimilada ee ku xiran Baaqa Glasgow waxa kale oo lagu maareyn doonaa Shabakadda Hal Planet.
Jeremy Smith, oo ah aasaasaha Dalxiiska ayaa ku dhawaaqay Xaalad Degdeg ah oo Cimilo ah, ayaa yiri: "Baaqadda Glasgow maaha kaliya ballanqaad - waa ballanqaad in la qaado tallaabo lagu dhimayo qiiqa qiiqa dalxiiska marka la gaaro 2030, iyo in la soo sheego horumarka la sameeyo sannad kasta. Waa muhiim in aan ku bilowno hamiga saxda ah, laakiin markaa shaqada adagi waxay bilaabataa runtii. Ka mid ahaanshaha Aasaaska Safarka waxay noo ogolaanaysaa inaan dadaalkeena u qaadno heerka xiga ee saamaynta caalamiga ah. "
Jeremy Sampson, Maamulaha Mu'asasada Safarka, ayaa yiri: "Waan ognahay inay tahay inaan iskaashi sameyno oo aan kor u qaadno si aan waligeed horay loo arag, isku xirka 'kor-ka-sare' iyo 'hoos-u-socodka' hababka anagoo dhiirigelinayna waxqabadka bulshada iyo abuurista kabaalyo loogu talagalay isbeddelka dowladaha oo dhan. iyo shirkadaha. U gudubka dalxiiska ee cimilada wanaagsan waxa kale oo uu ku saabsan yahay isbeddelka dalxiiska ee guud ahaan, u wareejinta qaab caddaalad ah oo dheellitiran baahiyaha dadka deggan iyo ganacsiyada iyada oo la maareynayo oo la dhimayo culayska meelaha loo aadayo.”
Aasaaska Safarka iyo Baaqyada Dalxiiska waxay ka qaybqaadan doonaan dhacdo rasmi ah oo COP26 online ah si loogu xuso bilawga Bayaanka Glasgow, Khamiista, Noofambar 4, saacada 1400-1600 GMT oo ay weheliyaan la-hawlgalayaasha VisitScotland, NECSTouR iyo Mustaqbalka Isbahaysiga Dalxiiska. Waad iska diiwaan gelin kartaa inaad ku biirto oo aad ka qayb qaadato dooda halkan.